Tichaita sei kuti tive nekutsvaga nyore nyore muna 2019?
Kutsvaga injini yekugadzirisa kunogona kunge kwakanyanya kuoma uye kutyisidzira, kunyanya kune vadzidzisi vechidiki vasina ruzivo rwezvakaitika. Iyi nharaunda inosanganisira nzira dzakasiyana-siyana dzokugadzirisa maitiro, nhamba, zvishandiso, mapurogiramu uye zvinyorwa zvekushandura. Uyezve, kutengeserana kwemajitisi hakusi kugadzikana kwemisika yemisika. Zvinyorwa zvakawanda uye zvakawanda zvinowanikwa munharaunda iyi zuva rega rega, uye zvakaoma kunyange kune nyanzvi kuchengetedza nezvose zvinopinda - caps ladies. Pasinei nematambudziko ose aya, pane nzira iri nyore yekufunga nezve SEO. Izvi zvinosanganisira zvikamu zvitatu zvakabatana uye zvakabatana zvinoshandiswa kuwedzera migwagwa. Zvinhu izvi zvinosanganisira - zvigunwe, zvisizvo zvakabatana, uye zvekugarisana nevamwe. Kushandisa nzira idzi dzokugadzirisa nzira nenzira yakarurama, iwe uchawana nyore nyore backlinks muna 2019. Iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kuzvinhu izvi zvitatu zvekugadzirisa maitiro sezvazvinenge zvichidikanwa chero ipi zvayo yemazuva ano SEO purogiramu yekubudirira. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitadza pane imwe nzira yekugadzirisa, unopedzisa pane peji yeGoogle SERP peji ine chirwere chakanyanya kuderera.
Tisati tatanga kukurukura nezvezvinhu izvi zvitatu, pane zvinhu zvishomanana zvinonzwisisika pamusoro pekushanda kwazvo mumatambudziko.
SEO components interrelation
Zvakakosha kugutsikana, backlinks uye social media sezvinenge zvakaoma ivo vanogadzira kubudirira kwekugadzirisa chinangwa. Kuti uite unhu uye unyanzvi hwehuwandu hwewebhu, haugone kusiya chimwe chezvikamu izvi sekutora nzira yekugadzirisa inoda kushingaira mune imwe neimwe yezvikamu zvitatu. Uyezve, chimwe nechimwe chezvikamu zvekutanga zveSeO zvinosimbisa vamwe. Kana imwe chikamu, e. g. , zvakagadzirirwa zvakaurayiwa nenzira yakarurama, zvimwe zvikamu zviviri (backlinks uye social media) zvinowanzounza kukosha kune web. Kuita injini yekutsvaga kugadzirisa nenzira yakarurama ituni yemabasa anotevera uye anofungidzirwa. Iwe haugone kuita chero zvishoma zvishoma mumushandirapamwe wako wekugadzirisa sezvo unokonzera kuipa kwehupenyu pawebsite yako SEO uye kuparadza maitiro ako kune dzimwe nzvimbo dzekugadzirisa. Nenzira yakanaka, iwe unogona kutaura kune vanyori muSeO. Vose vari vaviri uye vari mumba-SEO nyanzvi dzinogona kukubatsira kuti usangane nebhizimisi rako zvinangwa.
Saka, ngatikurukurei zvinhu zvitatu zve SEO zvikamu zvakakosha zvikuru kuti zviwane nyore kuwana backlink muna 2019.
Nhaurirano ndiyo yekutanga yepfungwa yenzira ipi zvayo yekugadzirisa zvinhu sezvo zvarinenge zvichiri mambo. Iyo inobata zvakananga chiitiko chevashandi newebsite yako uye inoratidza unyanzvi hwako mumhizha. Nzvimbo yepaIndaneti yega yega inogutsikana kuti injini dzinotsvaga dzinogona kutarisa, zvinyorwa izvi zvinonzi meta yehutano. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti hausi kungoita unhu uye tsvakurudzo-yakagadzirirwa asi unogonawo kugadzirisa metadata yako yakafanana neAUR, mazita, tsanangudzo, misoro, nemabhobhoti. txt.
Kunyange zvazvo iwe unogona kunge wakagadzirwa zvakanaka uye yakanyatsogadziriswa webusaiti, hauna kuitwa nekutsvaga injini yekugadzirisa. A blog inogona kuva mupiro wakanaka kwazvo kune webhusaiti yako SEO kushandiswa. Ndinokukurudzira zvikuru kuti usaregere kubhadhare sehuwandu hwehutano hunokwezva vashandisi kubva pakutsvaga uye kunoita kuti zvifambe zvakadzama mumajiji ewebsite yako.
Kana uchida kuva blogger yakanaka uye ukwezva vatengi vatsva pamapeji ako, iwe unoda kutevera matanho anotevera:
Ramba uchigadzira chimwe chinhu chitsva
Unofanirwa kubudisa zvinyorwa zvitsva pamapeji ebhulogi yako kuti uratidze mitsva yekutsvaga yako web source iri kushanda uye iri mupenyu. Kunyanya kakawanda blog yako inoshandiswa, mhinduro iri nani yaunowana kubva kuGoogle. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuchengeta bhaibheri yako itsva.
Ipa vashandi nhamba yakakosha
Kubudirira kwebhulogi yako zvakananga kunotarwa nenhamba yevadzidzi vako vehupenyu. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kunaka kwehuwandu hwaunoparidzira pa blog yako. Vashandi havadi kupedza nguva yavo vachiverenga vasingasviki, zvisinganzwisisiki uye zvisingabatsiri zvakagadzirwa. Iwe unofanirwa kuzvibatanidza nechimwe chinhu chakasiyana uye zvemashoko. Zvamunofanirwa zvinofanira kuva zvakanaka kuti vaverengi vagozvigovana.
Link building tactics dzinosanganisira vaparidzi mabhogi, pepanhau rekubudiswa kwemashoko, zvinyorwa, uye mamwe maitiro ekugadzira maitiro.
Chivakwa chekubatanidza chinhu chakakosha pakugadzirwa kwako kwekodhi uye kukurudzirwa sezvo injini dzekutsvaga dzichiziva nzvimbo yako yesimba uye nheyo yakabva kune marudzi ewebsite arikubatanidza iwe. Iyo yakanyanya yepamusoro webhu inotarisana newe, iyo yakakwirira iwe ichatsvaga pane peji yemigumisiro yekutsvaga. Kuti uwane unhu hwekugadzirwa kwehutano kubva kune dzimwe nzvimbo dzepamusoro, iwe unofanirwa kuva wehutano hwakanaka webhusaiti nehutano hwakanaka uye hunobatsira uye mukurumbira wakanaka pakati pevashandisi.
Kuti uwane hutano hwehutano hwemakombiyuta munharaunda yako, unofanirwa kuitisa kutsvakurudza kwemusika uye kuwana mablogi uye mawebsite akanangana newaako uye achibvumira kutumira vanhu. Zvino iwe unoda kutaurirana nadzimai vewebsite uye uvakubvunze nezvekubatanidza mikana yako. Iva nechokwadi chokuti iwe unogadzira zvinyorwa zvinotevera sezvo rudzi urwu chete rwemashure rinogona kuuya nehuwandu hunokosha huri panzvimbo yako. Hakuna nzvimbo inogona kubudirira mukutsvaga injini kunze kwekumwe dzimwe nzvimbo dzirikubatanidza nayo.
Ngatikurukurei kuti nzira dzipi dzakanakisisa dzekugadziriswa kwemashoko akanaka kunzvimbo yako ndeyi:
) Nzira iyo iwe unogona kuwana backlinks kuburikidza nevakagadzira mabhuku, ini ndagara ndatsanangura munyaya ino. Iyo ndiyo nzira yakanakisisa yekuvaka masangano sezvo inowanzoonekwa nevanotsvaga se spam. Uyezve, ndiwo mukana wakanaka wekutaurirana nechinangwa chevateereri uye kukwevera vatsva vangangotengesa kune marashi yako.
Kugadzira zvinyorwa zvinyorwa inzira yakangwara yekuvandudza mararamiro ako uye kutaurira vanhu pamusoro pezvinhu zvitsva uye kuchinja. Zvese zvaunoda ndekukudziridza chikamu chakanyora zvakanyora pane chimwe chinhu chinokanganisa mukambani yako uye uchichiisa kune pepanhau rekubudiswa kwekambani.
Nzira yehupenyu yekuwana yakanakira juice ndiyo kugadzira zvigadzirwa zvinokosha izvo vashandi vachagovana uye vanofarira. Chinobudirira chekubudirira ndoparadzira tsvakurudzo-yakagadzirwa nezvinhu zvakatevera zvinotevera ne infographics nguva dzose.
Ita zvinyoronyoro mumatareji edzimba kana mapoka mashoma emasangano emasangano
Zvinonzwisisika kuwedzera nzvimbo yako yebhizinesi kune mabhizinesi mabhuku sezvo kune vanhu vakawanda vari kutsvaga zvinoda masangano kuburikidza nemabhuku aya. Masangano kubva kune chero ani zvake anozivikanwa achabatsira kugadzirisa nzvimbo yako yepaiti, saka usapotsa mukana wako. Pane zvakawanda zvemashumiro pawebhu iyo inopa vashandi vepawebhandi nemikana yekuvaka mazano kubva kumakurukota ekumusha.
Gamuchira makwikwi ako backlinks
Unogona kubatsirwa nemakwikwi ako emakambani akatoisa maitiro avo mukuvaka chivako. Chokutanga pane zvose, iwe unofanirwa kutungamira mukukwikwidza nekuona tsananguro yako TOP5 niche. Zvadaro sarudzai zvinoshamwaridzana nevakwikwidzi vako vane uye mabvi anobva kune aya masangano anobva. Tsvaga makwikwi ekubatanidza vatsigiri uye vabvunze nezvekubatanidza mikana yebhizimisi rako.
3. Zvemagariro ehupfumi
Kuita zvekugarisana mune zvekugarisana ndeyetikiti yako kune nzvimbo yakakwirira pane SERP. Zvemagariro evanhu mumazuva edu ndeimwe chikamu chinokosha chekutsvaga injini. Nenzira dzezvemagariro evanhu, iwe unogona kutaurirana nevatengi vako uye ugadzikane nehukama hwehukama. Kunyanya kuwana zvakawanda zvekuda uye zvikamu zvinogona kukanganisa simba re peji, uye naizvozvo rakasarudzwa, zvichiita kuti vanhu vakawanda vave netsika dzavo.
Paunenge uchiita mishandirapamwe yako yekutengeserana, ramba uchifunga mupfungwa dzinotevera:
Google+, Facebook kana Twitter, unoda kushanda pasi payo zuva rega rega. Hazvina kukwana kuparidzira chinyorwa kamwechete pavhiki sezvo vateveri vako vachikurumidza kunetseka uye havazokuteveri. Saka, kana iwe uchida kubudirira munharaunda yemagariro evanhu, unofanira kupa vateveri vako mitemo yezuva nezuva pamashoko anonakidza, kuongororwa, nemakwikwi. Iwe unofanirwa kushandisa nzira dzose dzingaita kuti utaure nevateereri vako uye uite kuti zvive zvakakwana kune cheki yako.
Tsvaga niches yemunharaunda yakakosha kumhizha yako. Zvechokwadi, zvinotofanira kuumba bhizinesi rebhizinesi rako pane Facebook, Instagram, uye Twitter, asi idzi mapurisa ndeye chikamu chiduku chemasayenzi evanhu anowanikwa kwauri. Zvinonzwisisika kutarisa dzimwe nzvimbo dzekugara dzevanhu dzinoshumira niches dzevanotarirwa nevatengi.
Zvinhu zvitatu zvandakarondedzera munyaya ino. SEO kubudirira kunogoneka, asi kwete kunze kweumwe neumwe wezvinhu izvi zviripo zviripo uye zvakanyatsobatanidzwa. Mazuva ano, zvakaoma kutora mitsva yekutsvaga mhepo uye kukwirira nzvimbo yako nehomanana tricks tricks. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuisa nguva yako nekushingaira mukugadzira zvakanaka maitiro ekugadzirisa. Somugumisiro, iwe uchanowana kudzoka kwakakwirira pane utsvaga.
Unofanirwa kuva nehutano hwakakosha pakushanda kwako nekugadzirisa urongwa hunofanira kunge huchivakirwa pakuvaka kunze kwemashoko kubva kune mvumo yezvinyorwa munharaunda yako, kuumba unhu uye tsvakurudzo-zvakagadzirirwa zvakagadziriswa nepamusoro uye zvakakosha keywords, uye pakupedzisira kugadzira kuvapo kwakasimba kwehuwandu sehuwandu hwehuwandu hwevangangodaro vatengi vanoshandisa hukama hwemagariro ezuva nezuva.
Chero bedzi uchitsigira kuti iwe pachako unyanzvi (web design, kusanganisa, kugadzirwa kwehuwandu, kutsvakurudza kwemashoko, kushandiswa kwemetadata) kuri kufamba zvakanaka; iwe unotora mushandirapamwe unobatsira uye unokunda musungo wekuvakidzana uye unokurudzira chiratidzo chako pane zvekugarisana kwemasangano, iwe uchabudirira mubhizinesi rekuInternet.